Ingaba kukho iifle kubantu?
Iifleas kubantu: iimpawu, unyango, isithombe
Kuthekani ukuba umntu unentsimbi? Iingcebiso kunye neengcebiso
Kubonakala ngathi iintlobo ziyinja yeenja kunye neekati. Kodwa hayi, nabo bathanda igazi labantu. Ngoko ke, akuqhelekanga kwiimeko xa iifubhi zingabantu. Qaphela ukuba le ngxaki ilula: emzimbeni uza kubona amancinci amancinci amancinci ayeza kukhangela. Kule meko, kufuneka uthathe ixesha elikhawuleza ukuthabatha ulusu kwilaba bantu. Yintoni ekufuneka iyenzelwe le nto, apho kuvela khona ukuhlaselwa kwaye imiphumo engayikhokelela kuyo - funda ngokubanzi.
Yintoni ebangela i-fleas: izizathu eziphambili
Imithombo ebalulekileyo yeentambo zizilwanyana. Kwaye, ungeke ube nesilwanyana. Ukuze ube yixhoba lalezi zinambuzane zegazi, unokubamba isilwanyana esingenamakhaya ngokuhamba kwindawo yokucoca apho abathandi bathanda ukufudumala iimpawu zabo. I-flea eqhelekileyo iyakwazi ukulungiswa lula kwesikhumba somntu, kwaye ngoko, mhlawumbi, kunokwenzeka ukuba awuyi kuvakalelwa "entsha iqabane lakho". Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba ezi zigulo ziphindaphinda ngokukhawuleza. Ngokomyinge, enye i-flea ingafaka amaqanda angamakhulu amahlanu ezinwele okanye ekhumbeni. Ngokuqhelekileyo, iintsana ezikhukhulayo kufuneka zidle, kodwa oku akuyi kuba yingxaki kubo, kuba, ngokwenene, baphila ngokutya kwabo.
Kunzima ukufumanisa kunye nokuphelisa intshaba, njengoko ihlakaniphile kwaye isebenza. Ewe, kwaye kunzima kakhulu ukuchoboza i-flea ebanjwe. Isakhiwo salo sinokukuvumela ukuba uthathe uxinzelelo olukhulu.
Ziyiphi imiphumo yeentambo ezisebantwini?
Ngelishwa, ngaphezu kokutshisa okungathandekiyo, ukuvumba kunye nokubomvu, ezi zincinci zincinci zingabangela iingxaki ezinzima kumntu. Ziyakwazi ukukhuselwa ngokukhuselekileyo: i-tularemia, i-rat typhoid, i-dipilidia nesibetho. Ukongezelela, iifayile zingangena kumanxeba adibeneyo, zibeke amaqanda kuwo kwaye ziphile. Ngenxa yokusuleleka, ukuvuvukala okukrakra kunokwenzeka kwisiza sokuluma. Ngoko ke, okokuqala xa ufumana ezi zinambuzane emzimbeni wakho, kufuneka wenze into.
Ungayilahla njani iifere?
Lo msebenzi awulula. Kwaye konke ngenxa yokuba kudinga isethi yonke yamanyathelo okujoliswe kukutshatyalaliswa kwezi zidumbu. Okokuqala, kuya kufuneka uthenge iziyobisi ezikhethekileyo kwi-pharmacy ukwenzela ukulawulwa kwefuthe (ngamanye amaxesha umphumo omkhulu ugcinwa kwiindlela ezisetyenziswayo kwizilwanyana). Iingubo esahamba ngazo ngexesha lokutshatyalaliswa kufuneka zifakwe kwindawo yokucoca, njengoko ukuhlamba ngokuqhelekileyo okwaneleyo - ezi izidalwa zingaphila.
Ukukhishwa kwekhaya kwale ndwendwe ezingamenywanga kungcono ukubiza kwiingcali zokungakhutshwa kwezinambuzane. Uya kuhlambuluka kuyo yonke indlu, ungaphumeleli nakwiindawo ezifana neibhalkoni, iibhodi zokubhoboza, iikhabhinethi kunye nokuhlamba.
Oko kwangoku iipasasites ezifanayo "zidlula" iqela licetyiswa ukugcina amahlumela enomhlonyane kwiinkalo ezininzi. Ngomntu, le nto ivumba i-imperceptible, kodwa ngenxa yezinambuzane, iyanqanda.
Njengoko ubona, amanyathelo okuphelisa intlanzi ebantwini ayilula, kodwa ke, inokwenzeka. Ukukhusela ukusuleleka kwiintsholongwane, sincoma ukuba u tyelele i-dermatologist. Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba iintlobo azikhetheli amaxhoba ngesimo, ngokwesini okanye kwiminyaka yobudala, soloko ubizwa ngefowuni. Inhlanhla kwaye ulungile!
Impembelelo yokutya kwinqulatho ye-cholesterol egazini
Iimbangela zeentlungu zesifuba
Ixesha elide, iingxaki eziphambili
Ukutshaya kuyingozi kunye nokusetyenziswa kwengingqi
Indlela yokuzalisa umzimba ngomoya, kutheni kufuneka kwenziwe kwaye kutheni kubalulekile ukuyenza ehlobo
Iingcebiso ezifanelekileyo zokuhle kunye nempilo
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngoNyaka omtsha kwaye ubukeka ujabulise: ukutya kukaClaudia Schiffer
Utshintsho kumxholo: nento enxiba ngayo ingubo kule nkwenkwezi
Umgaqo wendlela yokugqoka umtya
Ukudweba abantwana: inkululeko yokudala, ukuphuhlisa ubuntu
Ukunciphisa ngesonto nge-3-5 kg ​​yokutya
Imfihlelo yesikhumba ecocekileyo nephilileyo
Ukunyamekela ngokufanelekileyo kweenduli
I-oatmeal porridge kwi-multivariate
IMvana kunye neerothi
Iipancake zeBhanana kunye neepoppy
Amachiza abantu, ibhalley kwiso
Yintoni ekuhlambulula ngayo?
I-Placenta ikhiphe kwi-cosmetology
Ukuhlaziywa kwefilimu ethi "Umtshakazi wezinye ihlabathi"
Ilayisi ngamakhowe kwi-multivark